4 talo oo Ay Waajib Tahay Inaad Raacdo Kulanka Koowaad ee Xiriirka Jacaylka.. Lamaanaha Aad Mustaqbalka Iska Leedihiin – Beegsonews-Wararka maanta
Home XOGAHA DUNIDA 4 talo oo Ay Waajib Tahay Inaad Raacdo Kulanka Koowaad ee Xiriirka...
4 talo oo Ay Waajib Tahay Inaad Raacdo Kulanka Koowaad ee Xiriirka Jacaylka.. Lamaanaha Aad Mustaqbalka Iska Leedihiin
Bilowga hore waxa lagaa arko ayaa waara, marka laga hadlayo nooca xiriirka aadanaha, gaar ahaan kan caadifadeed ee jacaylka la xiriira, sidaa dartee; labada lamaanaha waxaa waajib ku ah inaaney dabeecadooda caadiga ah wax ka bedelin oo ay ka wada hadlaan arrimaha muhiimka ah, si aaney cidina lama filaan ugu noqon waxyaabo xiriirka halleyn kara oo horseeda in la kala dhaqaaqo, sidaa darteed; sadaradan soo aaddan waxaan uga hadlaynaa talooyin ay waajib tahay iney raacaan dhinacyada xilliga kulankooda koowaad, waa sida uu qoray websiteka “Womansday”.
Talooyin ku aaddan kulanka koowaad
Ka fogow inaad waalidka dhaliisho ama dharka ay xirtaan aad wax ka sheegto, marka aad aqoon u leedahay, ama asxaabta lamaanahaaga uu leeyahay aad dhaliisho oo aad wax ka sheegto, maxaa yeelay; arrinaasi waxey dareensiineysaa inaad isaga/iyada aad si toos ah u dhaliilayso, arrintaas oo xiriirka xumeynaysa inta aanuu bilaaban ka hor.
Waxaa habboon in dhinac walba dhinaca kale uu la wadaago sababihii xiiiradooda hore ay u fashilmay, waa markii horey xiriirro hore loosoo sameeyay, iyadoo aan waxba la qarineyn, maxaa yeelay; waxaa dhici karta inuu qofku gadaal ka ogaado waxaad horey uga qarisay oo arrintaasi ay kalsooni darro gadaal ka dhaliso.
Waxaa waajib ah in si wanaagsan la isku dhageysto oo aad ra’yigaaga ka dhiibato go’aannada mustaqbalka ah ee gaarka ah u ah xiriirka.
Ka fogow inaad wax hanjabaad ah isticmaasho marka codsiyadaada ay kuu socon waayaan ama sida aad wax u rabto ay wax u hirgeli waayaan, maxaa yeelay; arrintaasi xiriirka ayey halleynaysaa, waxaana lagaa fahmayaa inaad tahay qof kaligii taliye ah, arrinaas oo keenaysa in dhinaca kale uu u fakaro inuu dib u gurto xiriirka.
Previous articleDaraasadu waxay shaaca ka qaaday saameynta rajo wanaaga iyo fikirka oo ku xidhan hurdo Wanaagsan
Next articleWararkii ugu dambeeyey ee wada-hadallada Korneyl Caare iyo Somaliland